Qaxootiga Soomaaliyeed oo ku sii kordhaya Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Allt fler somalier söker asyl i Sverige
Qaxootiga Soomaaliyeed oo ku sii kordhaya Sweden
La daabacay måndag 11 januari 2010 kl 13.41
Waaxda socdaalka ee wadanka Iswiidhan ayaa shaaca ka qaaday in tirada dadka qaxooti doonkaa ee somaliyeed ay si xowli ah u soo kordhayaan dalkaan Iswiidhan, kaddib markii ay maxkamada qaxootigu u arqtay in magaaladda Muqdisho iyo meelaha u dhaw dhawiba ay ka yiraan dagaal hubeeysan. Waaxda socdaalkuna ay balanta qaadeen ineey sharciyada siinayaan dadka ka soo carara magaaladda Muqdisho iyo meelaha kale ee dhibku ka socodo.
Qaxooti doonka Afkhanstaan ayaa kamid qaxootiyada sii badan ahaya, meesha ay markii hor tiradda ugu badan ka imaan jireen dalka Ciraaq. Sanadkii 2009 ayeey aqbaleen dalkaan Iswiidhan qaxooti gaaraya 21300 kuwaas oo badankood ka soo baxsaday dagaaladda ka socda Soomaaliya Ciraaq, iyo afqansta.
Qaxootigaan soomaliyee ee noqdey qoxootiga ugu tiradda badan ee laqaabilay sandkii tegay ayaa lagu qiyaasan 5000 oo ruux, ku waas oo iskugu jira caruur, dhalin yaro iyo dad waaween. Waxaase aad ugu badan dhalin yaradda kali socodka ku timaada dalkan Iswiidhan(ensamkommande asylsökande barn). Bishii novenbar ee sanadkii hore waxaa qaxooti weeydiistey dalkaan Iswiidhan 115 caruur, dhalin yaro kali socodda oo ka yimid Somalia sida ay sheegteen.
Siyaasadda soo galootiga